သနပ်ခါးမေ: ဝက်ခြံ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေမယ့် AC+ Spot care patch
Candy March 2, 2012 at 8:10 PM
မြတ်ကြည် အဲ့ဒါက ဆေးရောပါတာလား..
ကန်ဒီလည်း အဲ့လိုဟာသုံးဖူးတယ်။ ကန်ဒီသုံးတဲ့ဟာရဲ့ သဘောကကျတော့ ၀က်ခြံ အဆံတွေဘာတွေထွက်ပြီးလို့ ထွက်လာတဲ့အရည်ကြည်တွေကို စုပ်ပေးတဲ့သဘော။ မနက်လင်းရင် အဲ့ဟာလေးမှာ သူစုပ်ထားတာတွေ တွေ့ရတယ်။ အမာရွက်ပေါ်မှာတော့ မြတ်ကြည်ပေါ်သလို တခါမှ မကပ်ဖူးဘူး။ Just curious :D
Evy March 3, 2012 at 2:02 AM
မဆိုးဘူးညီမလေးရေ။ အသုံးဝင်မှာ သေချာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ သွားစရာလာစရာ အခမ်းအနားရှိရင် အမာရွတ်နဲ့ စိတ်ညစ်ရတယ်
ဘရဏီ March 3, 2012 at 2:42 AM
ချစ်စံအိမ် March 3, 2012 at 4:29 AM
မေမြို့မိုး March 3, 2012 at 5:32 AM
nyein nyein chan kyaw March 3, 2012 at 8:31 PM
အဲဒါက မှဲ့ခြောက်ရော ပျောက်လား မမ.. ညီမ မျက်နှာမှာ မှဲ့ခြောက်တွေ ရှိလို့ သုံးလို့ရလား သိချင်လို့.. သူက ခဏပဲ ပျောက်တာလား.. အမြဲ ကပ်ပေးနေရတာလား...
san htun March 4, 2012 at 9:54 AM
မဒမ်ကိုး March 4, 2012 at 7:54 PM
ငါးထောင်တန်ကဖတ်မရဘူး ဘိုဖြစ်လဲ ဆရာမရယ်း((
CC March 6, 2012 at 11:12 PM
ညီမလေးရေ... မျက်နှာပေါ်က dark spot ခေါ်မလား (အမည်းကွက်လေးတွေ) သက်သာစေတဲ့ နည်းလေးများရှိရင် ရှယ်ပေးပါဦးနော်။ အမ မျက်နှာမှာ (အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းနေရာ) မှာ အဲလို အမည်းကွက်လေးတွေ ပေါ်လာလို.။ Garnier dark spot corrector လေးတွေဝယ်သုံးတာ ၂တောင့်ကုန်တဲ့အထိ ဘာမှမထူးလာလို. မသုံးဖြစ်တော့ဘူး ညီမရေ...။ thank you!!! :)
ဒီမှာ မရှိဘူး.. ဟိုတလောက ဝက်ခြံတွေ အရမ်းပေါက်ထားတာ.. လိုချင်တယ်
မြတ်ကြည်လေး... လူလည်ကျထားတယ်ပေါ့ ...း)
မြတ်ကြည် October 2, 2012 at 9:50 AM
ပြောလိုက်မယ် ညီမလေး :D